Rail link Abidjan-Ouaga: Bolloré anonetseka pamusoro pekubatsira kweprojekti - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
HOME » upfumi »Rail link Abidjan-Ouaga: Bolloré anonetseka pamusoro pekubatsira kweprojekti - JeuneAfrique.com
Sitarail inotsigirwa neBolloré Group iyo inobata 67%, Côte d'Ivoire neBurkina zvakare vanogoverana (15% imwe neimwe). © DR
Kutarisana, kunyanya, mukukwikwidza kweguta reOriaga-Accra rekutakura kwemaminerari, rutivi rwomunharaunda rweBolloré Transport ne Logistics rwakamisa basa rezvitima Abidjan-Ouaga uye rinoshora zviremera.
Yakasimbiswa munaJuly 2016 asi yakagamuchirwa na Burkinabe Paramende muna December 2018Yakadzokororwa tendero chibvumirano (CCR) nokuda kwomudzimu uye kurapa njanji Abidjan-Kuching anopa $ 400 miriyoni euros kuti umutsidzire njanji kubatana (zvizere kuvandudzwa 852? Km kubva njanji, musi 1 260 km ichibatanidza Abidjan ku Ouagadougou, uye inyanzvi yekuchengetedza zvivako).
Maererano nehuwandu hwakawanikwa Young Africa Business Business +, boka reFrance rinonzi Bolloré Transport uye Logistique, ari mutariri wezvikwereti uye mutariri weCCR kuburikidza nesangano rayo reSaraire, achangobva kuunza kushushikana panguva yekusangana neAmerica. Boka rinonzi rakashuma sine kufa nebasa reBurkina, iro raifanira kutanga 18 yapfuura munaEpril kwemakore mashanu. Izvi ndezvekutsinhaniswa kwekutsvaga kwe 130 mamiriyoni ema euro akaenzana nechetete yekutanga. Ivory Coast, basa racho richiripo inopfuurira mushure mokutanga muna December 2017.